ဟိရဂဏသင်ခန်းစာများ - ဘယ်လိုဟိရဂဏရေးလိုက်ဖို့ "ma"
ဟိရဂဏရေးသားဖို့ကိုဘယ်လို: ma, မိုင်, mu, ငါ့ကို mo - ま, み, む, め, も
by Namiko ရှင်ဇိုအာဘေး
ဘယ်လိုဟိရဂဏရေးဖို့: ma ま
ဒီရိုးရှင်းတဲ့သင်ခန်းစာမှာ "ma" များအတွက်ဟိရဂဏဇာတ်ကောင်ရေးသားဖို့ဘယ်လိုလေ့လာပါ။ ဒါကြောင့်ဂျပန်စာလုံးများကိုရေးသားအခါလေဖြတ်အမိန့်အတိုင်းလိုက်နာရန်အရေးကြီးပါသည်, သတိရပေးပါ။ သင့်လျော်လေဖြတ်အလို့ငှာသင်ယူခြင်းလည်းဇာတ်ကောင်ရေးဆွဲဖို့ဘယ်လိုမှတ်မိဖို့သင်ကူညီပေးဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။
ဥပမာ: まくら (makura) --- ခေါင်းအုံး
သင်တို့ရှိသမျှသည် 46 ဟိရဂဏဇာတ်ကောင်ကိုတွေ့မြင်စီများအတွက်အသံထွက်နားထောငျခငျြတယျဆိုရငျ, ငါ့ကွိုးစားပါ ဟိရဂဏပေး Audio ဇယား စာမျက်နှာ။ တစ်ဘို့ လက်ရေးဟိရဂဏဇယား , ဒီ link ကိုစမ်းပါ။
ဂျပန်အရေးအသားအကြောင်းပိုမိုလေ့လာသင်ယူဖို့, ကြိုးစားကြည့် Beginners များအတွက်ဂျပန်ရေးသားခြင်း ။
ဒီရိုးရှင်းတဲ့သင်ခန်းစာမှာ "မိုင်" များအတွက်ဟိရဂဏဇာတ်ကောင်ရေးသားဖို့ဘယ်လိုလေ့လာပါ။ ဒါကြောင့်ဂျပန်စာလုံးများကိုရေးသားအခါလေဖြတ်အမိန့်အတိုင်းလိုက်နာရန်အရေးကြီးပါသည်, သတိရပေးပါ။ သင့်လျော်လေဖြတ်အလို့ငှာသင်ယူခြင်းလည်းဇာတ်ကောင်ရေးဆွဲဖို့ဘယ်လိုမှတ်မိဖို့သင်ကူညီပေးဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။
ဥပမာ: みなと (Minato) --- ဆိပ်ကမ်း
ဘယ်လိုဟိရဂဏရေးဖို့: mu む
ဒီရိုးရှင်းတဲ့သင်ခန်းစာအတွက် "mu" များအတွက်ဟိရဂဏဇာတ်ကောင်ရေးသားဖို့ဘယ်လိုလေ့လာပါ။ ဒါကြောင့်ဂျပန်စာလုံးများကိုရေးသားအခါလေဖြတ်အမိန့်အတိုင်းလိုက်နာရန်အရေးကြီးပါသည်, သတိရပေးပါ။ သင့်လျော်လေဖြတ်အလို့ငှာသင်ယူခြင်းလည်းဇာတ်ကောင်ရေးဆွဲဖို့ဘယ်လိုမှတ်မိဖို့သင်ကူညီပေးဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။
ဥပမာ: むし (မုရှိတည်း) --- အင်းဆက်ပိုးမွှား
ဒီရိုးရှင်းတဲ့သင်ခန်းစာအတွက် "ငါ့" များအတွက်ဟိရဂဏဇာတ်ကောင်ရေးသားဖို့ဘယ်လိုလေ့လာပါ။ ဒါကြောင့်ဂျပန်စာလုံးများကိုရေးသားအခါလေဖြတ်အမိန့်အတိုင်းလိုက်နာရန်အရေးကြီးပါသည်, သတိရပေးပါ။ သင့်လျော်လေဖြတ်အလို့ငှာသင်ယူခြင်းလည်းဇာတ်ကောင်ရေးဆွဲဖို့ဘယ်လိုမှတ်မိဖို့သင်ကူညီပေးဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။
ဥပမာ: めがね (Megan) --- မျက်မှန်
ဘယ်လိုဟိရဂဏရေးဖို့: mo も
ဒီရိုးရှင်းတဲ့သင်ခန်းစာမှာ "mo" များအတွက်ဟိရဂဏဇာတ်ကောင်ရေးသားဖို့ဘယ်လိုလေ့လာပါ။ ဒါကြောင့်ဂျပန်စာလုံးများကိုရေးသားအခါလေဖြတ်အမိန့်အတိုင်းလိုက်နာရန်အရေးကြီးပါသည်, သတိရပေးပါ။ သင့်လျော်လေဖြတ်အလို့ငှာသင်ယူခြင်းလည်းဇာတ်ကောင်ရေးဆွဲဖို့ဘယ်လိုမှတ်မိဖို့သင်ကူညီပေးဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။
ဥပမာ: もり (Mori) --- သစ်တော
ပြင်သစ်တွင် "Inquiéter" (စိုးရိမ်ပူပန်စရာ) Conjugate လုပ်နည်း
'' နေအိမ် '' များအတွက်စပိန်စကား
ပြင်သစ်တွင် "နောက်လိုက်" (ကာကွယ်ပါရန်) Conjugate လုပ်နည်း
( 'ကို Join မှ') ပြင်သစ်ကြိယာ '' Joindre '' Conjugate လုပ်နည်း
"Maigrir" Conjugate မှ (အလေးချိန်ဆုံးရှုံးဖို့, ထူးအိမ်သင်ဖြစ်လာ) ကိုဘယ်လို
Shiwasu - ဒီဇင်ဘာလ
ပြင်သစ်ဖော်ပြမှု Fair le ပိုတငျးအဓိပ်ပာယျဆိုတာဘာလဲ
ရူပဗေဒအတွက် Inertia ၏ Moment ဆိုတာဘာလဲ
သင့်ရဲ့စာသင်ခန်းနှင့်အတူဒေါက်တာ Seuss ရဲ့မွေးနေ့အခမ်းအနားကျင်းပ
အဆိုပါ 1966 Ford ကား Mustang2+2Fastback
အဘယ်သူမျှမအာဟာရတန်ဖိုးနှင့်အတူအဆိပ် Element တွေကို
အီတလီဂီတ Term Subito ၏အဓိပ္ပာယ်နှင့်ဥပမာများ
သင်ကအိုလံပစ်အားကစားပြိုင်ပွဲမှာစားပွဲတင်တင်းနစ် / Ping-Pong အကြောင်းသိထားမှ Wanted အရာအားလုံးကို
အီတလီအတွက်ကြိယာ "Vedere" Conjugate လုပ်နည်း
Ernest Hemingway အားဖြင့် '' လက်နက်တစ်ခု Farewell '' မှစ. quotes
Phonetic အင်္ဂလိပ်စာလုံးပေါင်းနှင့်အတူပုံ Gurmukhi ဝေါဟာရ
ပြင်သစ်ကြိယာ '' Savoir က 'Subjunctive လိုအပ်ပါသလား?
50 အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၏ဘူမိဗေဒ Maps ကို
ပုံစကိတ်စီးခြင်းတွင်ရှေ့သို့ crossover သလားလုပ်နည်း
အမေရိကန်ပြည်တွင်းစစ်ကြီး: ဗိုလ်ချုပ်ဗင်္ယာမိန်အမျိုးသား Grierson
ဗာဂျီးနီးယားစစ်ဘက်ဌာန (VMI) အဆင့်လက်ခံရေး
Juan ဂါဗြေ: မက္ကဆီကန်အဆိုတော်-တေးရေးဆရာများနှင့် Composer
အက်ဒ်ဝင်အမ် Stanton တို့, စစ်ပွဲ၏လင်ကွန်းရဲ့အတွင်းရေးမှူး
Phrygian အဘိဓါန် Dominant စကေးဂစ်တာသင်ခန်းစာ